Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » Vaksiny Sputnik V, lakile vaovao ho an'ny fizahan-tany Arabia Saodita
Travel Travel • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Tia mandehandeha ny Rosiana. Tsy ho ela dia afaka manampy an'i Arabia Saodita ho ao anatin'ny lisitr'ireo siny ireo natao vaksiny Sputnik V. Tafiditra ao anatin'izany koa ny fivahiniana masina Hajj sy Umrah avy amin'ny faritra maro.
Ny Fanjakan'i Arabia Saodita dia nanome fankatoavana ny fidiran'ny olona natao vaksiny tamin'ny vaksiny Sputnik V Rosiana nanomboka ny 1 Janoary 2022.
Arabia Saodita dia nanatevin-daharana ny firenena 101 hafa nankasitraka ny fidiran'ny olona voan'ny vaksiny Sputnik V taorian'ny fiaraha-miasa sy fifanakalozan-kevitra lehibe teo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana ao Arabia Saodita sy ny RDIF, tohanan'ny Minisiteran'ny Fampiasam-bola ao amin'ny firenena.
Ny fanomezana fankatoavana ny Sputnik V natao vaksiny hitsidika an'i Arabia Saodita ary ny dingana iarahana amin'ny ady amin'ny valan'aretina dia nifantoka tamin'ny fihaonana teo amin'ny minisitry ny fahasalamana ao Arabia Saodita Fahad Al-Jalajel, minisitry ny fampiasam-bola ao Arabia Saodita Khalid Al-Falih ary ny tale jeneralin'ny RDIF Kirill. Dmitriev tany Riyadh tamin'ny fiandohan'ny Novambra.
Ny fanapahan-kevitra noraisina dia ahafahan'ny Silamo manerana izao tontolo izao voavaksiny amin'ny Sputnik V handray anjara amin'ny Hajj sy ny fivahiniana masina Umrah any amin'ireo toerana masina indrindra ao amin'ny silamo any amin'ny tanànan'i Lameka sy Medina.
Rehefa miditra ao amin'ny firenena ny olona voan'ny vaksiny Sputnik V dia tsy maintsy manao confinement mandritra ny 48 ora ary manao fitiliana PCR.
Ireo firenena manokatra ny sisin-taniny ho an'ireo izay nahazo ny vaksiny Sputnik V dia mampiseho ny finiavana hanampy ny indostrian'ny fizahantany sy ny orinasany ho sitrana haingana kokoa. Raha manokatra ny sisin-taniny ho an'ny vaksiny Sputnik V i Arabia Saodita, ity fanapahan-kevitra ity dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fampitomboana ny fivezivezen'ny mpizaha tany sy ny fametrahana fifandraisana ara-barotra vaovao eo amin'i Rosia sy Arabia Saodita, ao anatin'izany ny asan'ny The Russia-Saudi Economic Council.
Niorina tamin'ny taona 2019, ny Filankevitra dia mikendry ny hamolavola fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra eo amin'ny roa tonta ary koa ny fampiasam-bola eo amin'i Rosia sy Arabia Saodita amin'ny sehatra rehetra. Izy io dia tarihin'i Kirill Dmitriev, Tale Jeneralin'ny RDIF, ary Andriamatoa Prince Abdullah bin Bandar bin Abdul Aziz, Minisitry ny Mpiambina Nasionaly ao amin'ny Fanjakana.
Amin'ny ankapobeny, ny fanavahana ny fahazoan-dàlana amin'ny vaksiny COVID amin'ny taratasy fanamarinana vaksiny dia dingana lehibe iray hafa hisorohana ny fanavakavahana amin'ny vaksiny ary hanohanana ny ezaka ataon'ny governemanta amin'ny fanokafana indray ny sisin-tany ho an'ny mponina sy ny mpizahatany.
Fepetra fototra amin'ny firenena 102 mamela ny fitsidihana manaraka ny vaksiny Sputnik V[*]:
Ny olona vita vaksiny Sputnik V dia mety hitsidika firenena 31 amin'ny fitambarany tsy misy fankatoavana fanampiny mifandraika amin'ny COVID-19;
Firenena 71 hafa dia mangataka PCR ratsy na fitsapana antibody tsara na manana fepetra fanampiny amin'ny fidirana.
Firenena 15 ihany no mila vaksiny ankoatry ny Sputnik V. Ny 5 amin'ireo firenena ireo ihany (latsaky ny 9% amin'ireo dia iraisam-pirenena), anisan'izany i Etazonia (misolo tena latsaky ny 3%), no miantehitra tanteraka amin'ny lisitry ny vaksiny nankatoavin'ny OMS izay Sputnik V. andrasana amin’ity taona ity.
Loharanom-baovao: ministeran’ny firenena tsirairay avy, toerana fizahan-tany
* Visa sy (na) fahazoan-dàlana fidirana hafa ilaina, Ny olona iray dia tokony hahafeno fepetra hafa tsy mifandraika amin'ny fameperana coronavirus. Ny famakafakana ny fahafahana miditra dia mifototra amin'ny fepetra takian'ny mponina any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ary mety tsy hita taratra ny fameperana na ny fampindramam-bola manankery ho an'ny firenena voafantina na sokajy sasany. Firenena 27 no mbola mihidy sisintany ho an'ny mpitsidika avy amin'ny ankamaroan'ny firenena hafa